acrylic ဆေးနှင့်ကတ်ထူပြား | လက်မှုပညာ On
ဂျဲနီရေတွင်း | | လက်မှုပညာ, EVA ရော်ဘာနှင့်အတူလက်မှုပညာ, စက္ကူလက်မှုပညာ, ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်အတူလက်မှုပညာ, လက်မှုပညာနှင့်ပစ္စည်းများ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင် ကတ်ထူပြားအခြေခံနှင့် acrylic ဆေးသုတ်ထားသောဆောင်းရာသီသစ်ပင်. ဤရာသီတွင် နှင်းများကျသောနေ့များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏နံရံများကိုအလှဆင်သည့် ရှုခင်းကိုဖန်တီးရန် ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီနှင်းကျတဲ့သစ်ပင်ကို ဘယ်လိုဖန်တီးနိုင်လဲ သိချင်ပါသလား။
1 ဆောင်းသစ်ပင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ
သစ်ပင်၏ပင်စည်အတွက် အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အညိုရောင်ကတ်ထူပြား (၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဤလက်ရာအတွက် ဤဆေးသုတ်နည်းကို အသုံးပြုတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကို အမှတ်အသားများ သို့မဟုတ် acrylics ကဲ့သို့သော ဆေးများနှင့်လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အဖြူ acrylic ဆေးသုတ်
ကော် (အပင်ကို ကတ်ထူပြားနဲ့ လုပ်မယ် ဆိုရင်)
ပြီးလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းများ (ဟုတ်ကဲ့၊ သင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းထိပ်များကို အသုံးပြုပါမည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက ကတ်ထူပြားအခြေခံကိုဖြတ်လိုက်ပါ။ငါတို့ ပန်းချီကားရဲ့ နောက်ခံဖြစ်မယ့်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ငါတို့ရဲ့ ပန်းချီအရွယ်အစားကို ရပြီဆိုရင်တော့ အချိန်တန်ပြီ။ ငါတို့အပင်၏ ပင်စည်နှင့် အကိုင်းအခက်တို့ကို ထားကြလော့။. ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ အညိုရင့်ရောင်ကတ်ထူပြား (အညိုရောင်၊ အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်...) ကိုဆွဲပြီး လှီးဖြတ်ပြီးရင်တော့ ဒီဖြတ်တောက်ပုံလေးကို အရင်ကတ်ထူပြားပေါ်မှာ ကပ်လိုက်ပါ။ အခြားရွေးချယ်စရာမှာ ဤသစ်ပင်ကို ဆေးသုတ်ရန်၊ အမှတ်အသားများ သို့မဟုတ် acrylic ဆေးသုတ်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးကို လျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့စေပြီး ဤလက်ရာတွင် ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်သောကြောင့် အမှတ်အသားများ သို့မဟုတ် acrylic ဆေးများကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။
ယခုတော့ ပျော်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ စက္ကူတစ်ရွက် ဒါမှမဟုတ် ပလပ်စတစ်အိတ်လိုမျိုး မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အဖြူရောင်ဆေးနည်းနည်းထည့်မယ်။ acrylic ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ချောင်းထိပ်များကို စိုစွတ်ပြီး တံဆိပ်ရိုက်ရန် စတင်ပါမည်။ ငါတို့သစ်ပင်၏အကိုင်းအခက်အားလုံး၌။ အခြားရွေးချယ်စရာအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် temperas ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » acrylic ဆေးနှင့်ကတ်ထူပြားဖြင့်ဆောင်းရာသီသစ်ပင်
ပျော်စရာနှင့် လွယ်ကူသော ကောက်ရိုးလက်မှုပညာ ၁၅
Fox က -shaped bookmarks